လမျးပျေါထှကျပွီးပွညျသူလူထုနဲ့အတူ ပါဝငျအားဖွညျ့ရငျး တူလေးရဲ့အနာ ဂတျ ကိုတှေးပွီးစိတျပူလို့ငိုမိတယျ ဆို တဲ့ G FATT - My Blog
လူငယျ အဆိုတျောတဈယောကျဖွဈတဲ့ G Fatt ကတော့ လကျရှိမှာ ပွညျသူထဲက ပွညျသူ တဈ ယော ကျအနနေဲ့ မွနျမာ့ဒီမိုကရစေီ လှတျလပျမှုအတှကျ ဆန်ဒပွတောငျးဆိုနကွေတာပဲ ဖွဈပါ တ ယျ။ G Fatt က မွနျမာပွညျတှငျးမှာဖွဈပကျြနတေဲ့ ပွညျသူ့အစိုးရကို ဖမျးစီးထားတဲ့ စဈအာ ဏာ ရှငျတှကေို ငွိမျးခမျြးစှာ ဆန်ဒပွနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
နစေ့ဉျနတေို့ငျးလိုလို လမျးမပျေါထှကျ ဆန်ဒပွနတေဲ့ G Fatt ကတော့နိုငျငံအတှကျအုတျတဈ ခကျြ သဲတဈပှငျ့စာ ပါဝငျအားဖွညျ့ရငျး တူလေးရဲ့ အနာဂတျကို စိတျပူလို့ ငိုမိတယျဆို တဲ့အ ကွော ငျး အခုလိုပဲ ပွောပွလာပါတယျ။
“ခကြှေဗေားရားလကျသဈတှတေိုကျစဈဖှငျ့ကွတော့ငါတို့မြိုးဆကျလဲ ထပျခပျြမခှာ တံတိုငျး ဆော ကျရတော့တာပါပဲ ယောကျဖရေ .. မငျးတို့ငါတို့ ဖတျဖူးတဲ့သမိုငျးတှကေို မငျးတို့ငါတို့ လကျ တှဖွေ့ တျသနျးကွရတဲ့အခါ အုပျလေးတဈခပျြ သဲလေးတဈပှငျ့ဆိုတာထကျတော့ ပိုသငျ့တယျမ လား? နနေိုငျသူတှကေိုတော့ ထားလိုကျပါတော့ကှာ ။ မနနေိုငျသူတှနေဲ့ ရှဆေ့ကျကွတာပေါ့ ။ အမကေ ငိုတယျကှ ငါ့ကို စိတျပူလို့တဲ့။ ငါလဲ ငိုတယျကှ ငါ့တူလေးအနာဂါတျကိုစိတျပူလို့ ။” ဆိုပွီး ပွော လာ ပါတယျ။
G Fatt ကတော့ လူငယျတဈယောကျပီပီ ပွညျသူ့ဆန်ဒအတိုငျး ရှေးခယျြတငျမွှောကျထားတဲ့ ပွညျ သူ့အစိုးရ ပွနျလညျလှတျမွောကျရေးနဲ့ စဈအာဏာရှငျစနဈအောကျကနေ ရုနျးထှကျဖို့ ကွိုးစား နေ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈ နကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုက်ပါတယျနျော။
လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးပြည်သူလူထုနဲ့အတူ ပါဝင်အားဖြည့်ရင်း တူလေးရဲ့အနာ ဂတ် ကိုတွေးပြီးစိတ်ပူလို့ငိုမိတယ် ဆို တဲ့ G FATT
လူငယ် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ G Fatt ကတော့ လက်ရှိမှာ ပြည်သူထဲက ပြည်သူ တစ် ယော က်အနေနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ လွတ်လပ်မှုအတွက် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာပဲ ဖြစ်ပါ တ ယ်။ G Fatt က မြန်မာပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရကို ဖမ်းစီးထားတဲ့ စစ်အာ ဏာ ရှင်တွေကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုလို လမ်းမပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြနေတဲ့ G Fatt ကတော့နိုင်ငံအတွက်အုတ်တစ် ချက် သဲတစ်ပွင့်စာ ပါဝင်အားဖြည့်ရင်း တူလေးရဲ့ အနာဂတ်ကို စိတ်ပူလို့ ငိုမိတယ်ဆို တဲ့အ ကြော င်း အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“ချေကွေဗားရားလက်သစ်တွေတိုက်စစ်ဖွင့်ကြတော့ငါတို့မျိုးဆက်လဲ ထပ်ချပ်မခွာ တံတိုင်း ဆော က်ရတော့တာပါပဲ ယောက်ဖရေ .. မင်းတို့ငါတို့ ဖတ်ဖူးတဲ့သမိုင်းတွေကို မင်းတို့ငါတို့ လက် တွေ့ဖြ တ်သန်းကြရတဲ့အခါ အုပ်လေးတစ်ချပ် သဲလေးတစ်ပွင့်ဆိုတာထက်တော့ ပိုသင့်တယ်မ လား? နေနိုင်သူတွေကိုတော့ ထားလိုက်ပါတော့ကွာ ။ မနေနိုင်သူတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ကြတာပေါ့ ။ အမေက ငိုတယ်ကွ ငါ့ကို စိတ်ပူလို့တဲ့။ ငါလဲ ငိုတယ်ကွ ငါ့တူလေးအနာဂါတ်ကိုစိတ်ပူလို့ ။” ဆိုပြီး ပြော လာ ပါတယ်။
G Fatt ကတော့ လူငယ်တစ်ယောက်ပီပီ ပြည်သူ့ဆန္ဒအတိုင်း ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြည် သူ့အစိုးရ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစား နေ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ် နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက္ပါတယ်နော်။